Sanad guuradii Shanaad ee ka soo wareegtay Xasuuqii Shamoow – Wakaaladda Wararka Soomaaliyeed
Sanad guuradii Shanaad ee ka soo wareegtay Xasuuqii Shamoow
By Abdihakim Sharif Ali / December 3, 2014 December 3, 2014
Sedaxdii December sanadkii 2009 waxey dadka Soomaaliyeed u aheyd maalin madoow oo waxaa Hotelka Shaamow ee magaalada Muqdisho ka dhacay Qarax ay ku geeriyoodeen ku dhowaad 40 ruux, kuwaas oo isugu jiray waalidiin, Arday, mas’uuliyiin ka tirsanaa xukuumaddi R/wasaare Cumar C/rashiid, dhaqaatiir, wariyeyaal iyo dad kale oo aad u badan.
Hotelka Shaamow waxaa ka socotay munaasabad shahaadooyin lagu gudoonsiinayay arday ka qalinjabisay Jaamacadda Banaadir ee magaalada Muqdisho kuwaas oo bartay culuunta kala duwan ee lagu dhigo Jamacaddaasi.
Munaasabadda shahaadooyinka lagu guddoonsiinayay arday ka qalin jabisay Jaamacadda Banaadir waxaa ka qeyb galay wasiirro ka tirsanaa xukuumaddii KMG aheyd, waxaana ka mid ahaa wasiirradii ka qeyb galay munaasabadda wasiirka wasaaradda caafimaadka Qamar Aadan Cali, wasiirkii wasaaradda waxbarashada Maxamed C/llaahi Waayeel, wasiirkii hiddaha iyo tacliinta sare, Prof Ibraahim Xasan Cadoow, wasiirkii wasaaradda dhalinyarada iyo Isboortiga Saleebaan Colaad Rooble.
Sidoo kale munaasabadii maalintaas dhaceysay dadkii ka qeyb galay waxaa ka mid ahaa dhakhaatiir kala duwan kuwaas oo qaarkood ay bareyaal ka ahaayeen Jaamacadda Banaadir, arday, waalidiin aad u faraxsan kuwaas oo caruurtooda kala qeyb galay munaasabadda shahaado gudoonsiinta ah iyo wariyeyaal lagu casuumay munaasabadda si ay farxadaasi bulshada Soomaaliyeed ugusoo tabiyaan.
Jawigu waxa uu ahaa mid aad u wanaagsan ardaydu waxa ay ku labisnaayeen dharka lagu yaqaano dadka ka aflaxay waxbarashada jaamacadeed ee shahaadada lagu guddoonsiiyo.
Dadkii ku sugnaa goobta waxa ay ahaayeen kuwo dhageysanayey khudbadaha ay jeedinayeen qaar ka mid ah ka qeyb galeyaasha, marqura waxaa is badalay jawigii ku dheehnaa farxada waxaa la maqlay qarax weyn oo gilgilay Hotelkii, jawiga waxa uu noqday mid isku badalay murug.
Qaraxii ka dhacay Hotelka waxa uu galaabtay dad badan oo ay kujireen Seddax wasiir oo mar qura goobta ku nafbaxay kuwaas oo kala ahaa Qamar Aadan Cali wasiirkii caafimaadka, Maxamed C/llaahi Waayeel wasiirkii waxbarashada iyo prof Ibraahim Xasan Cadoow iyadoo ay ku geeriyoodeen dhaqaatiir uu ka mid ahaa Prof Maxamed Aadan Warsame “Shahiid”.
Sidoo kale qaraxa waxaa ku geeriyooday arday waalidiin iyo wariyeyaal ku sugnaa goobta munaasabada ay ka dhaceysay, qaraxaasi sababay dhimashada dad badan waxaa ku faanay maleeshiyada kooxda Al-shabaab.
Sidoo kale qaraxaas oo ahaa mid murugo xooggan kaga tagay qalbiyada shacabka Soomaaliyeed waxaa ku dhintay suxufiyiin ay ka mid ahaayeen: Maxamed Amiin Aadan Cabdulle oo u shaqeynayay idaacadda Shabeelle iyo Xasan Subeyn Xaaji Xasan oo isaguna ahaa sawirqaade ka tirsan telefishinka Al-Carabiya, iyadoo ay jireen suxufiyiin kale oo ku dhaawacmay.
Markii uu dhacay qaraxa waxaa shir jaraa’id qabtay Madaxweynihii hore ee Soomaaliya Mudane Sheekh Shariif Sheekh Axmed waxa uuna shacabka Soomaaliyeed iyo eheladii ay ka geeriyodeen dadkii ku dhintay qaraxa uga tacsiyeeyay geeridii ku timid.
Sheekh Shariif ayaa sheegay in aysan qalqal galin doonin hanaanka dowladiisa waxa uuna intaasi ku daray in howsha halkeeda ay ka socon doonto.
Dadkii ku dhaawacmay qaraxa waxaa loo qaaday dalka Kenya kadib waxaa loo duuliyay dalka Sacuudi Carabiya waxaana dadkii dhaawacooda la qaaday ku jiray wasiirka wasaaradda dhalinyarada iyo Isboortiga Saleebaan Colaad Rooble oo mudo kadib u geeriyooday dhaawacii ka soo gaaray qaraxa.
Waalidiinta dhalay ardaydii lagu laayey qaraxaas ayaa iyaguna dareenkooda muujiyay iyadoo qaarkood ay sheegeen in lagu dilay qaraxaas caruurtooda oo ay dhibaato kusoo koriyeen waxna ku bareen, si ay u anfacaan naftooda, dadkooda, dalkooda iyo waalidiintood.
Al shabaab waxa ay si aan ka leex leexasho laheen u qirteen qaraxii ka dhacay hotelka waxaana la rumeysanyahay in qaraxaasi uu fuliyay mid ka mid ah maleeshiyaadka kooxda shabaab oo ka yimid dalka dibadiisa.
Kuma ekaan shabaab Qaraxaasi, bahalnimada ah Shaamoow ee waxaa jiray qaraxyo badan oo ay ku laayeen arday iyo dad waxgal u ah bulshada waxa ayna inta badan horjoogeyaasha ka tirsan shabaab ay sheegaan in dadka ay xasuuqeen ay yihiin kuwa ka baxay diinta.
Dhaqanka shabaab ayaa ah kuwo ay kasoo minguuriyeen wadamada carabta kuwaas oo inta badan ay ka dhacaan falal isqarxin ah oo lala eegto dadka bulshada waxgalka u ah taasi oo ay uga golleeyihiin iney bulshada indha tiraan.
by: Omar Hassan Khaire
Wasiir Maareeye oo daah furay adeeg casri ah oo lagu soo kordhiyay Warbaahinta Qaranka “SAWIRRO”
Dowladda oo gurmad caafimaad gaarsiisay Cadaado “SAWIRRO”
Tirada Xaaladaha COVID19 Ee Dalka Laga Diiwaan Gelinayo Oo Hoos u Dhacay “SAWIRRO”
Waddada isku xirta Ceel Jaale iyo Beladweyne oo dib u furantahay “SAWIRRO”
Wasiirrada Shaqada iyo Gargaarka XFS oo ka wada hadlay arrimo dhowr ah+SAWIRRO
Wasaaradda Amniga Galmudug oo la wareegtay baraha koontarool ee Magaalada Gaalkacyo
Madaxweyne Waare oo kulan la qaatay saraakiisha ciidamada AMISOM ee ka howlgala Gobolka Hiiraan